HomeWararka CiyaarahaNedum Onuoha ayaa Sheegay inuu kalsooni ku qaba in Pep Guardiola uu qandaraaska u kordhin doono Manchester City
Daaficii hore ee Manchester City Nedum Onuoha ayaa kalsooni ku qaba in Pep Guardiola uu heshiis cusub u saxiixi doono kooxda.
51-sano jirkaan ayaa qandaraaskiisa Etihad Stadium uga haray wax ka badan 12 bilood, waxaana uu dhawaan shaaca ka qaaday inuusan dooneynin inuu wadahadalo heshiis cusub ah la galo ilaa xagaaga 2023.
Si kastaba ha ahaatee, Onuoha – oo ka soo baxay akadeemiyada City oo uu siddeed sano la joogay kooxda sare intii u dhaxaysay 2004 iyo 2012 – ayaa aaminsan in Guardiola “aad ugu raaxaysanayo” kooxda wuxuuna ku kaftamay inuu si lama filaan ah ugu dhawaaqo qandaraas cusub.
Isagoo la hadlayay Sports Mole ka hor inta aan la sii deyn taariikh-nololeedkiisa ‘Kicking Back’ May 17, Onuoha wuxuu yiri: “Waxaan u maleynayaa inuu saxiixi doono qandaraas cusub, laakiin waxay u badan tahay inuu u samayn doono si dhab ah Pep.
Waxaan noqon lahaa mid aan dhaqan ahayn oo waxay noqon doontaa meel aad u yaab leh. Waxaa laga yaabaa inuu helo nooc ogeysiis ah, sida qoraalada taleefankiisa oo markaas la geli doono baraha bulshada isagoo leh ‘Pep waa ogolaaday, saxiixida qandaraas hal maalin ka badan kan Jurgen Klopp’ ama wax la mid ah.
“Laakiin waxaan filayaa inuu saxiixi doono heshiis cusub Waxaan u maleynayaa inuu aad iyo aad ugu raaxaysanayo halkan, marka la eego hareeraha, maskaxda ciyaartoyda, maskaxda shaqaalaha ku hareeraysan, kaabayaasha, waxaan hubaa inuu sameyn karo. iyada oo ay aad u badan tahay qorraxdu, laakiin waxaad mooddaa in dadku ay ku habboon yihiin hammigiisa. Haddii uu bixi lahaa, xaggee kale oo uu awood u leeyahay inuu sameeyo?”
Imaanshiyaha Erling Braut Haaland xagaagan iyo kor u kaca Phil Foden ee macalin Guardiola, Onuoha wuxuu rumeysan yahay in City ay leedahay mustaqbal rajo leh oo soo socda, wuxuuna dareensan yahay inaysan jirin sabab uu tababaraha Isbaanishka u doonayo inuu soo afjaro waayihiisii ​​guulaha badnaa ee kooxda.
ilaa hadda. “Waxaan u maleynayaa in tani ay u badan tahay meesha ugu fiican isaga, maaha in la yiraahdo kubada cagta isma bedeli doonto, laakiin waxaan u maleynayaa inuu saxiixi doono, waxaana jeclaan lahaa inuu saxiixo sababtoo ah tani waxay dareemeysaa inay tani tahay Pep’s Manchester City.
“Marka uu isbedelku yimaado, oo ay lama huraan tahay, waxaan u maleynayaa inay u diyaar garoobi doonaan, laakiin waxaan dareemayaa inay aad ugu dhakhsaha badan tahay inay soo dhawaadaan waayaha Pep ee Man City, sababtoo ah waxaad arki kartaa soo saaristaas.
Qof sida Haaland oo kale ah, waxaad weli haysataa Foden da’da 21, oo dhawaan 22 jir noqon doonta, waad ogtahay inuu weli jiro mustaqbal aad iyo aad u ifaya oo uu heli karo haddii uu sii joogo.
” Tan iyo markii uu qabtay xilka Etihad xagaagii 2016, Guardiola waxa uu kula guuleystay 10 koob isaga oo Man City ah, oo ay ku jiraan saddex koob oo Premier League ah, afar League Cups iyo hal FA Cup.
Koobkii 11-aad ee Citizens ayaa laga yaabaa inuu u socdo tababaraha Catalan xilli ciyaareedkan, inkastoo rajadooda sii wadista horyaalka Premier League ay hoos u dhacday ka dib markii ay barbaro 2-2 ah la gashay West Ham United axadii, natiijadu waxay la macno tahay inay horyaalka ku xafiiltamaan. Liverpool ayaa laga yaabaa inay soo yareyso farqiga dhibcaha hal dhibic haddii ay guul ka gaarto Southampton Talaadada.